यि नेता राेजे देउवाले ! - www.kchhakhabar.com
यि नेता राेजे देउवाले !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २९, २०७४ समय: ११:४८:५२
काठमाडौं २९ं चैत । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, खड्का र विश्वकर्माको नाममा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउने सवालमा भने धेरै विमति नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘जारी बैठकको अन्तिममा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारीमा सभापति हुनुहुन्छ,’ स्वकिय सचिव देउवाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधनपछि १६ चैतबाट स्थगित बैठक ७ वैशाखमा बोलाइएको छ ।
तर, महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाणको पनि दाबी छ । खाणलाई देउवाले यसअघि नै प्रमुख सचेतक बनाए पनि स्वीकार गरेका थिएनन् । पदाधिकारीमा नअटाउने डरले उनले प्रमुख सचेतक अस्वीकार गरेका थिए । तर, पछि देउवाले समेट्ने आश्वासन दिएपछि उक्त पद स्विकारेका थिए । त्यसो त नातेदारसमेत रहेका कार्कीलाई महामन्त्री बनाउने आश्वासन देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएदेखि नै दिँदै आएका थिए ।
तर, सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थमन्त्री बनेका कार्कीले सहयोग नगरेको भन्दै देउवा रुष्ट छन् । कार्कीले श्रीमती डा आरजु राणा देउवाले भनेको काम गरेको, तर आफूले भनेको नटेरेको उनको निष्कर्ष छ । हालै दुवै नेताले देउवालाई भेटेर पदाधिकारीमा नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बूढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो ।
यता सहमहामन्त्रीमा विश्वकर्माको नाम अगाडि सारेपछि एनपी साउद र डा। प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री छँदा महतले आफ्नो छवी बिगार्ने गरी राजदूतमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै देउवा पदाधिकारीमा तान्न इच्छुक छैनन् । साउदलाई देउवाले सुदूरपश्चिमबाट उकास्न चाहन्छन् । तर, नेता विश्वकर्मालाई सहमहामन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर १३औँ महाधिवेशनमै आफ्नो गुटमा तानेकाले देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।